जिन्दगीमा मौका कहिले आउँछ, त्यो भन्न सकिन्न – आइन्सटाइन - Birgunj Sanjalजिन्दगीमा मौका कहिले आउँछ, त्यो भन्न सकिन्न – आइन्सटाइन - Birgunj Sanjalजिन्दगीमा मौका कहिले आउँछ, त्यो भन्न सकिन्न – आइन्सटाइन - Birgunj Sanjal
जिन्दगीमा मौका कहिले आउँछ, त्यो भन्न सकिन्न – आइन्सटाइन
२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार ००:०९
एकपटक महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइन एउटा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमाझ आफ्नो मन्तव्य दिन निम्त्याइएका थिए । निर्धारित समयमै आइन्सटाइन विश्वविद्यालयको सभाकक्षमा उपस्थित भए । सभाकक्षका कुर्सीहरू खचाखच भरिएका थिए । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकदेखि विद्यार्थीसम्म सबै बडो उत्सुकतासाथ उनको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए ।
आइन्सटाइन सभाकक्षको मञ्चमा पुगेपछि उपस्थित सबैले आ–आफ्नो सिटबाट उठेर कर्तल ध्वनिसाथ ताली बजाएर उनको भव्य स्वागत गरे  । कार्यक्रम सञ्चालकले अत्यन्त छोटो औपचारिकतापछि आइन्सटाइनलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरे  । आइन्सटाइनले आफ्नो मन्तव्य सुरु गरे  । उनले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई उत्प्रेरणा दिने खालका केही विचार राखे ।
यस क्रममा उनले भने – हेर्नुहोस् भाइबहिनीहरू ! हाम्रो जीवनमा मौका पटक–पटक आइरहँदैन  । जब आउँछ, त्यसलाई खेर जान नदिई समाइहाल्नुपर्छ । त्यसरी अचानक आएको मौकाको सही सदुपयोग गर्न सकिएन या जानिएन भने जीवनभर पछुताउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले, हाम्रो शिरमाथि आउने मौकालाई फुत्त उफ्रिएर(चलाएमान भै रहनु) समाइहाल्नुपर्छ ।
आइन्सटाइनको मन्तव्य ध्यानपूर्वक सुनिरहेका एक विद्यार्थी बीचमै आफ्नो सिटबाट अचानक उठे र हात उठाए । आइन्सटाइनले उनलाई देखेर बोल्ने मौका दिए । विद्यार्थीले प्रश्न गरे– हजुरले भनेजस्तो मौका हाम्रो जिन्दगीमा कहिले आउँछ, त्यो पनि भनिदिनुभएमा हामी बुरुक्क उफ्रिएर त्यसलाई समाउने थियौँ । के हामीलाई यत्ति बताइदिन सक्नुहुन्छ ?
प्रश्न सुनेर मन्द मुस्कुराउँदै आइन्सटाइनले भने– जिन्दगीमा मौका कहिले आउँछ, त्यो भन्न सकिन्न । त्यही पूर्वजानकारी नहुने भएकाले नै मौका आएर खेर नजाओस् भन्नका लागि हामी जहिल्यै उफ्रिरहनुपर्छ  । अनि मात्र जहिले त्यो मौका आउँछ, त्यतिखेर त्यसलाई समात्न तपाईंहरू सक्षम हुनुहुनेछ । त्यसैले, जीवनमा उफ्रिन कहिल्यै नछाड्नुहोस् ।